Ny mombamomba ny orinasa-Dongguan Weishun Silicone Technology Co., Ltd
Dongguan Weishun Silicone Technology Co., Ltd dia naorina tamin'ny taona 2003, miorina ao amin'ny tanàna mandroso Hengli, tanàna Dongguan, faritanin'i Guangdong.Dongguan Weishun Silicone Technology Co., Ltd dia mpanamboatra vokatra silicone matihanina manana traikefa mihoatra ny folo taona, manana ekipa ODM matanjaka izay afaka mamolavola vokatra silicone amin'ny kalitao avo lenta sy ny vidiny mirary araka ny fangatahan'ny mpanjifa.
Ny orinasanay dia manana hery ara-teknika matanjaka, OEM & ODM dia raisina, ny fitaovana sy ny vokatra rehetra dia afaka mandalo fitsapana FDA sy LFGB. Hatramin'ny niorenany tamin'ny 2003, ny tanjonay dia ny hanome ny mpanjifa amin'ny "vidiny mirary", "vokatra avo lenta" ary " Fanaterana ara-potoana".
Ny ekipan'ny mpiasanay dia nitombo avy amin'ny mpiasa 10 ho mpiasa maherin'ny 50, faritra misy orinasa manana 3000 sq.m., miaraka amin'ny fitaovana famokarana 20 samihafa ary misy vokatra manta 150 taonina mahery isan-taona.Efa an-taonany maro izahay no mivarotra vokatra amin'ny tsena anatiny sy any ivelany.
Ny tantaran'ny marikaNy mpanorina ny Dongguan Weishun Silicone Technology Co., Ltd, Mr Jiawei Li, dia nanomboka niasa tamin'ny famokarana fitaovana silicone fony izy 16 taona ary nijanona tao nandritra ny 8 taona.
Tamin'ny 2002, nanatrika fampirantiana silikônika iraisam-pirenena Shanghai izy, nahita vokatra silikônika izay nafarana avy any Alemaina, nahasarika azy lalina tamin'ny endrika tsy manam-paharoa, ny teknika famokarana mandroso ary ny antsipiriany saika henjana.
Namorona fanentanana hita maso izany, tamin'izany fotoana izany, ny anarana marika antsoina hoe "Weishun Silicone" dia naorina tao an-tsainy, tapa-kevitra izy ny hamorona orinasa mpamokatra vokatra silicone malaza Shinoa ary mankafy ny laza iraisam-pirenena amin'ny ho avy.
Noho izany Andriamatoa Jiawei Li dia nahita ny "Weishun Silicone" azy tamin'ny taona ho avy, izay tanjona amin'ny famokarana karazana vokatra silicone azo antoka sy sakafo.
Nahoana ianao no misafidy WeiShun Silicone
Manana 3000㎡ faritra orinasa, 20 samy hafa napetraka ny famokarana fitaovana, mihoatra ny 50 mpiasa, matotra famokarana teknolojia, haingana santionany sy ny fanaterana sy ny fotoana nitarika haingana.
Miaraka amin'ny hery R&D matanjaka, manana fitaovana famokarana bobongolo maro, vokatra lehibe.Afaka manome logos fanontana, serivisy loko mahazatra.
WeiShun dia nahazo mari-pankasitrahana Business Social Compliance Initiative (BSCI).Ary ny akora silica gel dia mifanaraka amin'ny fenitra FDA & LFGB.
Ny ekipa Weishun dia manao hetsika haingana ho an'ny traikefa mpanjifa tsara.Manome antoka izahay fa hamaly ny mailakao ao anatin'ny 24 ora latsaka amin'ny andro fiasana.